Home Wararka Natiijo malaga filan karaa shir aan horay looga soo heshiin qodobada...
Natiijo malaga filan karaa shir aan horay looga soo heshiin qodobada la isku haysto
Waxaa wali muran ka taagan yahay qabsoomida shirka Wadatashiga Qaran oo ilaa iyo hada aan la isugu imaan ama aan furmin. Magaalada Muqdisho waxaa ku kulmay Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble & Madaxda Dowlad-Goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hir-Shabeelle iyo Koofur Galbeed. Kulaas oo ahaa mid sawir iska qaadid ah laakiin aan maranana looga hadlin arimahada doorashooyinka.
Kulamada ayaa looga hadlay furmashada Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ee ka dib dhacay 27kii December 2021 kaddib qalalaasihii ka dhacay Madaxtooyada iyo Madaxweynaha DG Koofur Galbeed oo Muqdisho ka maqnaa.
Afhayeenka XFS Maxamed Ibraahim Macalimu waxa uu sheegay in Xukuumadda laga sugayo ku dhawaaqista waqtiga uu furmayo shirka maadaama Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxda Dowlad-Goboleedyada kulamo gaar gaar ah ku yeesheen Caasimadda.
Sida qorshuhu yahay, Saacadaha soo socda waxa ay Xukuumadda Federaalka ku dhawaaqeysaa waqtiga uu furmayo shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ee looga hadlayo jadwal u dejinta waqtiga Doorashooyinka lagu soo gabagabeyn karo.
Wasiirka koowaad ee XFS & Madaxda Dowlad-Goboleedyada ayaa kawada xaajoonaya sidii loo dardargelin lahaa dhammeystirka Xildhibaannada ka dhiman Golaha Shacabka, in Aqalka uu sii doorto Guddoon iyo ka fikirka waqtiga ay la tahay in lagu soo gaba-gabeyn karo.
Hadii markale jadwal been abuur ah la soo saaaro ama mid aan la fulin doonin dalka doorasho kama dhici doonto ilaa dabayaaqada sanadkaan!
Previous articlePuntland oo ka hadashay iscasilaada madaxda guddiga doorashada
Next articleNotorious Eritrean-Dutch human trafficker arrested in Kenya
Waxaa magaalada cadaado soogaaray wafdi kasocda DDS
Colaadii Gobolka Sool oo heshiis hordhac ah laga gaaray